न्यूजील्याण्ड आक्रमण: विश्वव्यापी सेंसरशिपको निश्चित स्थापना, जनसंख्याको असहमति र ध्रुवीकरण: मार्टिन विजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	18 मार्च 2019 मा	• 29 टिप्पणिहरु
यदि क्रिस्टचर्च मा क्रिस्टचर्च मा 'ब्रेंटन हैरिसन टारंट' को हमला एक PsyOp छैन, तब यो निश्चित रूप देखि ठूलो एजेंडा धेरै राम्रो कार्य गर्दछ। संवेदना कथित लाइभ स्ट्रिम छविहरू, बहस गर्न सक्छ कि यसले अधिक मानिसहरूलाई आक्रमण गर्न को लागी विचार दिन सक्छ, विश्वभरको लागि एकदम सही अल्बे हो सामाजिक मीडिया सेंसरशिप एक आदर्श हुन। तपाईं आश्चर्य गर्न सक्नुहुन्छ कि यो सबै लाइभ स्ट्रिम हेर्दै हुनुहुन्छ? के सरले यसलाई आफ्नो फेसबुक साथी सूचीमा घोषणा गरेको छ? यो आश्चर्यजनक छैन कि मान्छे पछि छविहरू हेर्न चाहनुहुन्छ, किनकि ती वर्षहरू युद्धका लागि वा आतंकको छविहरू देखाउँदा मिडियाले के गर्दैछ? "आक्रमण" को लागि पनि एक राम्रो कारण थियो आम्दानी प्रवेश गर्न अन्तिम तर कम से कम, यो बायाँ र दायाँ र धार्मिक जनसंख्या को बीच ध्रुवीकरण को लागि काफी योगदान गर्दछ, जस्तै वर्णन मा यो लेख.
हामी एक स्क्रिप्ट साक्षी गर्दैछौं जसले ग्लोबल सरकारको आधार बनाउनेछ। यो विश्व सरकार एक विश्व धर्म, एक लिङ्ग र एक जातिको लागि प्रयास गर्दछ। त्यो पुरानो रोमन मोमिम 'ओडोदो चाओ' (अराजकताबाट अर्डर) मार्फत गरिनेछ। यसका लागि, विश्व जनसंख्या पहिला तेस्रो विश्व युद्धको माध्यमबाट जानु पर्दछ (लिपि अनुसार), जसमा धार्मिक चासोहरू प्रमुख हुन्छन्। प्रमुख विश्व धर्महरूको भविष्यवाणीले यसमा अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एकपटक यरूशलेमको लागि युद्ध समाप्त भएपछि, विश्व जनसंख्या समाप्त हुनेछ र अस्वीकार र नयाँ लूसिफरियन संयुक्त राष्ट्र आदेशको अनुकरण गर्नेछ। यस प्रक्रियाको लागि, धार्मिक तनाव पहिला परिमार्जन गर्नु पर्छ। मेरो अनुमान यो हो कि इस्लामी ब्लक शक्ति प्राप्त हुनेछ। मलाई विश्वास छ कि टर्की पुनरुत्थानवादी तुर्कमेन्ट साम्राज्य को माध्यम ले यस मा एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। एकै समयमा, हामी अमेरिकी शक्ति क्रमांक देख्नेछौं। यदि मैले पुरा प्रक्रिया (लिपि) फेरि दोहोर्याएमा म दोहोर्याउछु, त्यसैले म तपाईलाई थप विवरणको लागि उल्लेख गर्दछु यो लेख.
जबकि यो ठूलो एजेन्डा चोर जारी छ, हामी अब हेर्छौं कि विश्वभरको वेब (इन्टरनेट) शाब्दिक रूपमा अधिक र अधिक बन्द हुँदैछ। प्रमुख सोशल मिडिया पार्टनर (फेसबुक, Google, इत्यादि) को सेंसरशिप उपाधिले 1 झन्डामा न्यूजील्याण्ड "आक्रमण "सँग निश्चित गरीएको छ। कुनै पनि जसले यो रक्षा गर्न सक्दैन र यस्तो धेरै भावनात्मक प्रभावको "आक्रमण" को कारण, हामी पनि प्रमाण को कसरी देखेका छन "समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान'आफ्नो पूर्ण महिमामा काम गर्दछ। विगतमा, मीडियालाई जॉन एफ क्यानेडीको हत्याको भिडियो फुटेज देखाउन अनुमति दिइएको थियो, 911 आक्रमण वा आईएसहेडिंग्स, बिना भनिएको छ कि यसले अरूलाई प्रेरित गर्न सक्छ। तथापि, सोशल मिडियाले अहिले यी न्यूजील्याण्ड छविहरू को विश्वव्यापी संवेदनाको बिना बिना संघर्ष वा दाबी गर्दछ। छविहरू जुन मार्गले हामी गहिरो नक्कलीसँग काम गरिरहेका छौं कि प्रश्न उठाउन सक्छ।
मेरो भिमेको च्यानल केही सेकेन्ड भित्र छविहरू राख्नुभयो, जब सबैलाई मैले देखाउन चाहन्छु कि छविहरू बिग्रेको छ र उनीहरूले कति समान हुन्छन् गहिरो नकलीकिनभने तपाइँ पर्खालहरूमा कुनै रगत वा बुलेट प्रभावहरू देख्नुहुन्न। (थप पढ्नुहोस् ..)
र जब "यस आक्रमण" पछि सबैले डर, उदासी वा क्रोध र ध्रुवीकरणलाई ध्वस्त गरिरहेको छ, ट्राजीगेंडरलाइजेशन र ट्राफुमन्युमेसनको एजेन्डा रेसिङमा छ। यद्यपि विरोध, अमेरिका, रूस, टर्की, चीन र अन्य जस्ता देशहरूमा विद्यमान हुने देखिन्छ, यी सबै देशहरू अहिले प्रविधि परिचय दिन सक्ने काम गर्दछ जसले मानवतालाई डिजिटल दासत्वमा ल्याउन सक्छ। यही कारणले गर्दा सबै देशहरूले दृश्यात्मक क्षेत्रमा लडाइँ दृश्यहरू पछिको एजेन्डाको सेवा गर्छन्। दृश्यात्मक फिल्डमा यो ध्रुवीकरण मात्र ठूलो मास्टर स्क्रिप्ट पूरा गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। यो संधै ध्रुवीकृत समूहहरु बीच र धार्मिक भविष्यवाणी को पथ को माध्यम ले संघर्ष को माध्यम ले गरिन्छ, किनकि यो मास्टर लिपि को भाग हो। तथापि, अन्तिम लक्ष्य लूसिफेरियन शासन अन्तर्गत मानवता ल्याउन हो। मानिसजातिलाई मस्तिष्क र शरीरको साथ इन्टरनेटमा जोडिएको हुनुपर्छ जुन अन्ततः एकलता हासिल गर्न। धर्मबाट अपेक्षित मसीहको संख्या शायद 'क्लाउड' बाट आउनेछ (विवाहित वास्तविकताको बारेमा सोच्नुहोस्, हेर्नुहोस् यहाँ en यहाँ थपको लागि)।
मैले बुझें कि यो सबै abracadabra जस्तो लाग््छ, तर यो यो अवधारणा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ किनभने यो त्यो कुन प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरू (जसले अब यो अन्तिम सेंसरशिप माप लिनु भएको छ) पछ्याउँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरू मान्छे र एकलताको ट्राफुमेमेनमेन्मेन्टको लागि प्रयास गर्छन्। "के ट्राफुमन्युमेसन? एकताबद्धता?म तिमीलाई सुनेको छु। हो, ट्राफुमेमेनमेन्सी र सिंगुलरिटी। यस शब्दावलीको टिप्पणी लिन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। राजनैतिक आन्दोलनहरूले यरूशलेमको लागि ठूलो युद्धमा धार्मिक लिपिहरू पछ्याउँछन्, तर ती कानुनहरू पनि लागू गर्दछ जसले ट्राफुमेन्टमेन्सन र ट्रागगेंडरमेन्सनलाई धक्का दिन्छ। 5G सञ्जालहरूको सिर्जना; डीएनए डेटाबेस स्थापना गर्दै; अनिवार्य टीकाकरण कानूनको परिचय; ट्रान्सगेंडर कानून धक्का; तिनीहरू सबै यस एजेन्डामा योगदान गर्छन् (हेर्नुहोस् यहाँ en यहाँ)। त्यसैले तिनीहरू सबैलाई 'मास्टर लिपि' भनिन्छ, जस्तै कि म यसलाई सामान्यतया भन्छु। त्यसैले म सुझाव दिन्छु यो लेख यसलाई राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्नुहोस्, ताकि तपाईंले ठूलो तस्वीर मार्फत देख्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि नीलो लिङ्कहरू अन्तर्गत लेखहरू पढ्नको लागि समस्या लिनुहोस् ताकि मास्टर स्क्रिप्ट तपाईंलाई स्पष्ट हुन्छ।
यदि हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं कि अधिक से अधिक मान्छे एक प्रकार मा मीडिया को माध्यम ले पूरी दुनिया को एहसास भयो Trumanshow वास्तविकतामा राखिएको छ, जहाँ जनसंख्या आबादी समूहहरूलाई ध्रुवीकरण गर्न कथित हमलाहरू मार्फत खेल्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रक्रिया रोक्न सक्छ। अराजकता सिर्जना गर्न ध्रुवीकरण एक वांछनीय प्रक्रिया हो। एकपटक अराजकता हुँदा, 'बलियो हात' द्वारा हस्तक्षेपको लागि कल स्वतः उत्पन्न हुन्छ। केवल व्यक्तिहरूले हेर्नको लागि सुरु गरिसकेका चीजहरू ध्रुवीकरणलाई रोक्न सक्छन् र लिपिलाई कम गर्न सक्छ।
ट्याग: आक्रमण, ब्रेंटन, संवेदना, क्रिस्टचर्च, नियन्त्रण, फेसबुक, विशेष, बन्दूक, हैरिसन, बाँच्न, औसत, नयाँ, ध्रुवीकरण, सामाजिक, स्ट्रिम, Tarrant, आतंकवाद, आतंककारी आक्रमण, भिडियो, भिजेको, कानून, YouTube, Zeeland
18 मार्च 2019 मा 05: 42
हामी नबिर्सनु पर्छ कि हामी नूहको रूपमा एकै समयमा बाँच्न सक्छौं। प्रायः डीएनएबाट शुद्ध हुन्छ, कम से कम हामी अझै टेक्नोलोजिम सँग मेल खाँदैनौं। तपाईं बाढी आउँदै हुनुहुन्छ के गर्न सक्नुहुनेछ, तर धेरै मानिसहरू तपाईमा हँसिरहन्छन्।
न्यूजील्याण्डमा यहाँ मान्छेले राम्रो प्रतिक्रिया देखाए, बुबालाई ध्यान दिएनन् र यो स्पष्ट गरे कि हामी त्यस्तो छैनौं। अर्कोतर्फ, अफ्रिकीमा ईसाईहरूको हत्याको बारेमा खबरहरूमा कुनै पनि कुरा देखाइएको छैन वा यदि इजरायलले प्यालेस्टिनियनहरूलाई पराजित गर्दछ भने।
स्कूलहरु लाई फिलिमहरु साझा नहीं गर्न को लागि भनिएको छ किनकी यो धेरै भयानक छ या किनकि यो अपराध को ध्यान मा ध्यान दिदैन। यसलाई अब कल वा शुल्क वा किल्लाहरू बजाउन नचाहिएको छैन। यो भने छैन कि Nedflix मा हिंसक श्रृंखला पनि मन को लागि राम्रो छैन। हो, तर यो वास्तवमा भने जस्तो होइन, हो, हामी आज राम्ररी जान्दछौ कि वास्तविक र नकली हो।
यसको अतिरिक्त, यो पनि हुन सक्छ कि यहाँ न्यूजील्याण्डमा समय (कटौती) फसल समय हो। यस हप्ताको अन्त्य पछि मानिसहरू धेरै निराश हुन्छन्, तपाईले यो जाँच गर्न सक्नुहुन्छ कि यो सकारात्मक र नकारात्मक दुबै किसानले कति मात्रामा ऊर्जा उत्पन्न गरेको छ। विशेष गरी ग्यारह (अत्यन्त कम आवृत्तिहरू) बदला लिनका सबै भावनाहरु जुन उत्पन्न गरिएको छ। जबसम्म यो खानपान हुन्छ, संसारले राज्यमा वरिपरि कताई राख्छ अहिलेको रूपमा।
आमा पृथ्वीमा एक पर्दा छ, त्यसैले यस पृथ्वीमा महिलाहरु पनि पर्खाल वरिपरि हिंडिरहेका छन्, धर्महरु बीच कुनै फरक छैन।
यद्यपि अब हामी एक समय मा पर्दा भंग गर्न शुरु गर्दैछौं र म अधिक समय अधिक परिवर्तन गर्न सुरु गरिरहेको छु। यही कारण सबै कुरा छिटो हिँडिरहेको छ किनभने पुरानो संसारको समय चलिरहेको छ।
म तिनीहरूलाई नयाँ डिजिटल संसारको साथमा धेरै प्रसन्न चाहान्छु, मलाई थाहा छ कि किन जहाज वा जहाज बर्बाद हुन्छ। यसकारण मलाई लाग्छ कि तपाई टर्कीको बारेमा सही हुनुहुन्छ!
म भाग लिन चाहन्छु, म बस हेर्न आउछु 😎
18 मार्च 2019 मा 07: 25
क्रिश्चियन साथीहरूको माध्यमबाट मैले नाइजीरिया र मिश्रमा आक्रमणको रिपोर्ट पाएका थिए। यदि सही छ भने NZ भन्दा धेरै धेरै पीडितहरू। मैले यो समाचारमा देखेको थिएन, मेरो गल्ति हुन सक्छ।
तारा NZ को लागि पैसा दिने जाँदैछन्;
सोच्दा तिनीहरू नाइजीरिया र मिश्रको लागि पैसा दान गर्दछन् भने।
18 मार्च 2019 मा 08: 20
ठीक छ, म जान्छु यो सिंक र मार्टिन खुशी छैन।
तर यो दास देश अब राम्रो छैन। उनी आज हड्तालमा रहेछन् कि ब्लेकले 66 मिनेट टाढे! यसको बारे प्रचार अब लामो भयो। 66 मिनेट अब के हो? एक 'ट्रेड यूनियन' को रूप मा, तपाईं शासन को पट्टा मा रहेर तपाईं आफु को मूर्ख बनाउदै हुनुहुन्छ। ट्रेड यूनियनले 'राम्रो' पेंशन चाहान्छ। राम्रो र अस्पष्ट अब के हो 'राम्रो'। केवल कठिन आवश्यकताहरू सेट गर्नुहोस् र यसको लागि जानुहोस्। आवश्यक भएमा,2लाई एक पटकमा महिनाको लागि रोक्नुहोस्। तर हो दासहरूले हिम्मत गर्दैनन्। कार्य गरिरहेको छ। नेदरल्याण्ड अन्य देशहरूमा ठूलो मुख छ। यद्यपि, कसरी यो अन्यथा हुन सक्छ, किनभने त्यहाँ जीवित छन्, सामान्य संदिग्धहरू, एक शत्रु कुलीन, जो सेवाको प्रभारी छन्, उनीहरूले प्रमुख पदहरू राख्छन्।
18 मार्च 2019 मा 11: 26
यो समय हुन सक्छ कि तपाईंले मास्टर लिपिको अध्ययन गरेपछि 'रिजल्ट परिवर्तन' मन्त्र समायोजन गर्नु हुन्छ। त्यसपछि तपाईं पत्ता लगाउनुहुनेछ कि परिवर्तन परिवर्तन केवल जागरण आत्मा द्वारा बनाइन्छ र त्यसैले यो खेल खेल्न सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई व्याख्या गर्न आवश्यक छ। तपाईं त्यहाँ मात्र राजनीतिक परिवर्तनहरू पाउन सक्नुहुन्न।
18 मार्च 2019 मा 12: 04
मार्टिन धन्यवाद। सामान्य शंकास्पदहरूको मास्टर लिपि शक्तिमा रहेको र अधिकारको सामान्य जनसंख्याबाट बच्न अधिक शक्ति प्राप्त गर्नमा आधारित छ। उनीहरूले गर्न सक्छन् र यसो गर्न सक्छन् किनभने उनीहरूको राजनीति, मिडिया, आदिमा शक्ति छ। तपाईले यसलाई नाम दिनुहुन्छ। तिनीहरू मुख्य कुञ्जीहरूमा छन् र स्वैच्छिक रूपमा छोड्ने छैन। यसैले तिनीहरू सबै हेरफेर गर्छन्। यदि तपाईं यो गर्न चाहनुहुन्छ भने, मेरो विनम्र रायमा यो 'जागिर' हुन सक्दैन। तिनीहरू त्यो हँसिलो हाँस्छन्। यसको अतिरिक्त, तपाई प्रायः देख्न सकिन्छ कि नियन्त्रणमा रहेको विरोधले 'जागरूकता' शब्द अपनाएको छ। धेरै चाँडो, बाटोबाट। आखिर यो यो बारेमा हो, तपाईं जागिर गरेर अवरोधबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्न .. जागरूकता वा हेरफेर मात्र मात्र बुझ्दछ भने तपाईसँग शक्ति छ र सामान्यतया संदिग्धताहरू असक्षम र जागरूकता प्रयोग गर्दछ, समाजलाई उनीहरूको सामान्य शंकास्पद मेनूमा ल्याउन समायोजन गर्न। के हामी असहमत हुन सहमत हुन सक्छौं?
18 मार्च 2019 मा 12: 59
हामी सक्छौं तर म सोच्दछु कि कारवाही निश्चित हुन्छ यदि तपाई जान्दछ कि तपाईंको जीवनको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ (तपाईंको आत्मा)। त्यसपछि तपाइँ लिपिलाई कमजोर पार्नुहुन्छ र अब नियमहरू अनुसार खेल (सिमुलेशन) प्ले गर्दैन। उदाहरणको लागि, यो धर्मको बाहिरी भाग, बायाँ र दाँया दृष्टान्त वा वा ठिक सर्तहरूमा, प्रणाली भित्र कार्यहरू प्रदर्शन गर्न (जस्तै नौकरीमा)। त्यो सामूहिक हुनुपर्दछ, तर आत्माको स्तरमा हामी चीज reprogram / हैक गर्न सक्दछ (मूल तहबाट जसमा आत्मा अवस्थित छ)
18 मार्च 2019 मा 13: 01
त्यो "जागरूकता" शब्द को नियंत्रित वैकल्पिक मीडिया द्वारा अपहरण गरिएको छ, म तिम्रो साथ सहमत हूँ।
18 मार्च 2019 मा 11: 19
ठाउँ वा विषय टिप्पणीका लागि धन्यवाद।
अहिले अहिले के रहेको छ। Tarrant प्रस्तुत गरिएको छ भने त्यो
एक निश्चित समूह को प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो सामान्यतया सामान्य संदिग्ध, शत्रु कुलीन, द्वारा विचाराधीन र उनको साथ एक निश्चित समूह र यसैले सामान्य संदिग्ध नीतिबाट गुजरना बहिष्कार गर्न जान्दछन्। साथै, दुश्मन कुलीनले गलत कुरा गर्दछ कि Tarrant कुनै निश्चित समूहको प्रतिनिधित्व गर्न छनोट वा नियुक्त गरिएको छैन। यदि तारानले केही गरेन भने, उसले मात्र आफैले प्रतिनिधित्व गर्दछ र कुनै पनि होइन।
18 मार्च 2019 मा 11: 28
यस लेखमा फेरि यो सन्दर्भ पढ्नुहोस्:
18 मार्च 2019 मा 13: 45
वास्तवमा, यो सबै धेरै सरल छ।
हतियार प्रयोगका लागि सँधै आविष्कारहरू प्रयोग गरिएको छ र यसैले ती प्रहारहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन शासकले सोचेको छ।
त्यो काठ, बन्दुक, धातु, टैंक, विमानहरू, परमाणु हतियार थियो, तर त्यसो भए ......
त्यसपछि इन्टरनेट आयो।
Fakenews द्वारा दमन, छिटो पैसा स्थानान्तरण, गोपनीयता अस्वीकार, ठूलो भाइ क्यामेरा निगरानी, ​​आतंककारी नक्कली आक्रमणहरू, त्यसपछि थप सीमित प्रतिबन्धहरू।
जर्ज ओवेलले यो कल्पना गर्न सकेन। यो 1984 हो तर त्यसपछि 1000 समय खराब छ।
इन्टरनेट हाम्रो भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरू / बैंकरहरू र अन्तर्राष्ट्रियहरूको लागि उपहार हो।
र बेवकूफ नागरिकले यसलाई आफैंलाई ध्यान दिदैन, त्यो मौसममा हिंडिरहेको छ।
यससँग केहि पनि मद्दत गर्दैन।
परिवार, साथी र प्रियजनहरूलाई राम्रो होस् र परमेश्वरले समाधानको प्रस्ताव दिन दिनुहोस्
20 मार्च 2019 मा 00: 38
आईएसराली गुप्त खुफिया सेवा द्वारा प्रशिक्षित
हामीसँग एक जना जवान मान्छे, 28 वर्ष पुरानो, टन बहुमूल्य मुद्रा संग एक भौतिक प्रशिक्षक, जो संसारमा यात्रा गर्दछ, सबैले फोटोहरू, सबैलाई मनपर्छ, रहस्यमय तरिकाले एक व्यक्तिगत हत्या भोग्नु पर्छ।
हामीले वास्तवमा एक प्रशिक्षित हत्यारा, 42 वर्ष पुरानो एक यहूदी परिवारबाट छ जुन फिलीस्तीनीहरूको विरुद्धमा प्रशिक्षित गरिन्छ र दक्षिणी सिरियामा सेवा गरिरहेको छ र टेलिभिजनबाट बाहिर निस्कने, अल कायदासँग आइडिबिबमा सेवा गर्दछ।
4 महिला "पर्यटकहरू" "हैंडलिंग र रसद" मा सहयोग र स्थानीय प्रहरी काउन्टर ट्राफिकहरूले दोस्रो श्रोतालाई आपूर्ति गरे।
उनीहरूको संसारको दौडान "जवान मानिसलाई विन्डोजस्टस्ट" भनिन्छ, हामीसँग कुनै सामाजिक सञ्जाल छैन। हामीसँग कुनै विद्यालय फोटोग्राफहरू, कुनै कामको इतिहास, कुनै शिक्षा, कुनै जागिर इतिहास, अर्को "खाली व्यक्ति" छैन हाम्रो स्यान्डी हुक "शूटर" र धेरै अन्य।
यो समय उनले रूसी र सीरियाको बुद्धि द्वारा देखिएका क्षेत्रहरुमा क्रस गर्ने गल्ती गरे, जहाँ VT दैनिक निजी ब्रीफिंग प्राप्त गर्दछ। तिनीहरू उहाँलाई थाह छ, सबै पछि, उनी राष्ट्रपति अलद हुनुपथ्र्यो। ओह कि? सीएनएनले उल्लेख गर्न सकेन?
20 मार्च 2019 मा 08: 15
VT संग समस्या अक्सर तिनीहरू hoax को सट्टा झूटा झण्डा मानिन्छ, मेरो विचार हो।
20 मार्च 2019 मा 08: 21
यदि साँचो पीडितहरू छन् भने, जीवित रिटाइमहरू (प्रायः आमाहरू) तलल्लो चट्टान चाहन्छन्। यद्यपि यो वर्ष लाग्छ।
20 मार्च 2019 मा 10: 25
वास्तवमा एमबी, मुख्य हो, माथिकाहरू (वास्तवमा पनि बुबाहरू) पत्ता लगाउने सबै माध्यमहरू प्रयोग गर्नेछन्, उनीहरूले अधिकारीहरूलाई etcetera बिना परेशान बिना दिन दिन अनुमति दिँदैनन्। त्यो सार हो।
एक चोक्समा, अभिनेताहरूले कथित रूपमा TV र रेडियोमा चिन्ता गर्दै छन्, र त्यसपछि यो सामान्य जनता जस्तो देखिन्छ कि पारिवारिक सदस्यहरू पागल हुँदैछन्। मिडियामा शक्ति छ
झूटा झण्डा संग केहि पनि अनुमानजनक छैन र पागल चीजहरु एक होक्स को घटना मा हुन सक्छ, उनको 'सबै' मा आफ्नो 'सबै' छ, धेरै अधिक विश्वसनीय
20 मार्च 2019 मा 10: 04
आर्गनन, 'सुपर-मुस्लिम' पनि धम्की व्यक्त गरेर पश्चिममा आफ्ना युरोपियन भाइहरूसँग खेल खेल्छ। वैसे, के उहाँले टाइम म्यागमा लामो समयसम्म खडा गर्नुभयो? एउटै लिपि प्रयोग गर्ने सबै अभिनेताहरू जसले अमानवीय शंकास्पदहरूलाई यसको लागि अनुमति दिएको बेला मात्र केहि गर्दछ। हामी एक शत्रु कुलीन, बाह्य व्यक्तिहरूद्वारा शासित छौं, र यो विश्वव्यापी रूपमा हुँदैछ। तिनीहरू साधारण जनसंख्याबाट लुकाउँछन्। यो सामान्य टर्की आबादीमा पनि लागू हुन्छ। धर्म दमनको एक माध्यमको रूपमा।
21 मार्च 2019 मा 13: 01
यसका लागी एक अर्काको बारेमा जानकारी दिईएको छ।
Mossad जासूस रिंग 'क्राइस्टचर्च भूकम्पको कारण'
इजरायलको गोपनीय सेवा मस्सादले नोभेम्बरको क्रिस्टचर्च भूकम्पको कारण पत्ता लगाइएको थियो, जो न्यूजील्याण्डमा खुफिया-अप्ठ्यारो संचालन सञ्चालन वा चलाउँदै आएको छ।
यो उल्लेखनीय छ कि नाम मादियड को सबै प्रकार को नकली झण्डा संचालन को समयमा गिरावट जारी छ को बारे मा XDUMX /9को बारे मा एफओक्स प्रसारण को बारे मा सोचें Amdocs, Comverse आदि
एक पटक फेरि एक घटना, दुई पटक एक संयोग, तीन पटक ढाँचा ..
20 मार्च 2019 मा 08: 16
तिनीहरू टिप्पणीहरू पनि फ्याँकन्छन् भने तिनीहरूसँग तपाईं सहमत छैनन्।
20 मार्च 2019 मा 09: 25
म मीडिया को माध्यम ले समझता हूं कि एक Tarrant को आक्रमण को लागि न्यूजील्याण्ड मा कैद हो। मैले पनि बुझें कि कुनै फोटो प्रकाशित भएको बेला बेला यो फ्याँकिएको छ ??? प्रश्न चिन्हहरू कल गर्नुहोस्। यो बहिष्कार गर्न सकिँदैन कि एक डबल जेलमा छ वा ट्रार्तन्ट उनको हातमा एक राम्रो ककटेल संग समुद्र तटमा झरेको छ। त्यसपछि नयाँ पहिचान हुन्छ र अझै जारी छ। संसारभरि यात्रा गर्नुहोस्।
20 मार्च 2019 मा 09: 35
गहिरो नक्कली भिडियोहरूको साथ तपाईंले सजिलै असीमित व्यक्ति सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ
20 मार्च 2019 मा 09: 51
त्यो सही हो, तपाईंले आफ्नो साइटमा यो स्पष्ट गर्नुभयो। Tarrant को 'मूल' भिडियो न्यूजील्याण्ड, एक अपराध मा देखिन सकिँदैन। तिनीहरूले मेमोरी छेदमा सबै चीजहरू हराउन थाले। ठीक छ 'तथ्याङ्क' को बारे मा संदेह छैन। हामीले "तथ्यहरू" विश्वास गर्नुपर्छ। केवल एक धर्म।
20 मार्च 2019 मा 10: 54
उनी शरीरको डबल्स, नकली पहिचानहरूसँग काम गर्छन् र यो बुद्धिमानी संसार हो, त्यसैले यी नकली भिडियोहरू, हरी स्क्रिन प्रविधिहरू उदाहरणका लागि बेल्ज पट्टिङद्वारा निर्मित नकली आईएसहेड भिडियोहरू हेर्नुहोस्। तर के कुरा स्पष्ट छ कि बुद्धिमानी संसार भित्रको शेरियन्त्रक आन्दोलनले विभाजन र शासन लागू गर्न दिएको छ, विशेष गरी इस्लामिक समुदाय र ईश्वरवादवाद, ईसाईल ईसाइयों सहित। क्रिस्टचर्च बताउँदै
20 मार्च 2019 मा 05: 28
धेरैले रिपोर्ट गरेको छ कि व्यक्तिले फेसबुकमा पोष्टको लागि आक्रमणको सम्बन्धमा जरिवाना पाएका छन्।
कुनै साझेदारीको लागि अपराधीलाई ध्यान नदिने अनुमति छैन। जरिवाना, जेल सजावटहरू र जस्तै जस्ता ठूलो एजेन्डा सेवा गर्न सकिन्छ।
वास्तवमा एकअर्कासँग केहि गर्न छैन। तिनीहरू साँच्चै एकल-अभिनय गर्ने व्यक्तिहरू हानिकारक छन् जसले यो गर्छन्
20 मार्च 2019 मा 08: 09
सन्देशको पहिलो अंतिम संस्कार NZ, लेख 30 घायल (?) को कुरा गर्दछ।
"पछिल्लो शुक्रबारको नस्लगत उत्पीडित नरसंहारले अहिले सम्म 50 मानिसहरु खर्च गरेको छ। अर्को 30 व्यक्ति घाइते भएका थिए। आरोपित अपराधी - अष्ट्रेलियाबाट 28-वर्ष-दाहिने दाँत-विस्फोटवादीवादी - पूर्व-परीक्षण अवरोधमा छ। "
20 मार्च 2019 मा 14: 35
यो वायरल गएको छ कि शूटिंग "नकली" वा "नक्कली" को रूप मा भरिएको थियो, जो वास्तव मा कारण हुनु पर्छ कि उनि गलती देखि टोकरी मा गिर गयो। यो न्यूजील्याण्डको दोस्रो ठूलो 1 अनुसन्धान छ, वाह, र यदि तपाईं फुटेज साझा गर्नुहुन्छ भने तपाईं जेल जानुहुन्छ?
तल वर्णन गरिएको
टिप्पणिहरु पछि व्याख्या संग YT फिलिम हेर्नुहोस ...
बिल Wagner1 दिन पहिले
असम्भवतः यो एक मनोविज्ञान हो। प्रचार वा फुटेजको लागि जेल समय धूम्रपान बन्दूक हो।
16 उत्तर हेर्नुहोस्
chad calderone1 days ago
डेविन नुनजले $$$ lawsuits w / Twitter शुरू गरेको छ।
उत्पत्ति 7771 दिन पहिले
मानिसहरू किन धम्की दिइरहेछन् भने उनीहरूले पकडिएका छन् र यो सबै तिनीहरू प्रतिबद्ध छ। यो आज हामी कहाँ छन् राजनीतिज्ञ यति भ्रष्ट छन्
यूट्यूब चलचित्र तल
20 मार्च 2019 मा 15: 58
+ हतियार कानून कि तिनीहरूले बिजुली गति मार्फत हिँड्नु पर्यो ... अन्य शब्दहरुमा, उनीहरु यो अलमारियों को सबै समय मा थियो, यो केवल सही नकली ध्वज को इंतजार गर्दै थियो।
20 मार्च 2019 मा 15: 55
तर, फ्रिमेसोरीको बीच पिङ-पोंग सुरु भैरहेको छ र हजुरआमाहरूले सबैलाई ठूलो हाइट्सलाई पिटेर कसरी हेर्छन् वा क्यान्सर भन्थे वा म भन्न सक्छु भनेर तानिस 😀 "र त्यसपछि मात्र दस्तक"
र हामी इस्तांबुल अधिक र अधिक केन्द्रिय चरण देखिरहेका छौं ... यो इरादा थियो
20 मार्च 2019 मा 18: 26
के अन्त उर्दूयन अन्ततः सेवाको लागि चाचा अक्सल्फ जस्तो मार्गदर्शक पनि प्राप्त गर्छ जस्तो लाग्छ?
या म अब सैनिकों भन्दा अगाडी हूँ।
धैर्य सूर्य हामी यो हेर्न जाँदैछौँ।
21 मार्च 2019 मा 07: 38
के तपाईं यो गर्न चाहानुहुन्छ भने यो पाउनुहुन्छ ???
21 मार्च 2019 मा 17: 34
के मानिसले अब रगतको बोतल लिन्छ? अरू के हुन सक्छ। आफैलाई न्याय गर्नुहोस्
« के ब्रेंटन हैरिसन टारान्टले टर्की-दाँत विरोधी-टर्की आतंकवादको प्रारम्भमा आक्रमण गरेको छ?
आतंकवादी आक्रमण 24 Oktoberplein यूट्रेट मा, देश भर मा आतंक! »
कुल भ्रमण: 11.632.709